Irreecha Hora Finfinnee 2021 | KELLO MEDIA – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIrreecha Hora Finfinnee 2021 | KELLO MEDIA
Irreecha Hora Finfinnee 2021 | KELLO MEDIA
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee kabajamaa wayiita jirutti waraanni mootummaa miidhaa geessisuu hin oolle.
Keelloo: Onkoloolessa 2, 2021
Aadaa fi duudhaa uummata Oromoo kan ta’e kabajni ayyaana Irreechaa guyyaa har’aa Hora Finfinneetti kabajamaa jira. Ayyaana kana irraas uummatni Oromoo Miliyoonaan tilmaamamu argamee qooda fudhachaa jiraachuun mirkanaa’eera.
Duudhaaf aadaa Oromoo isa olaanaa kan ta’e Irreechi, waggoota dheeraaf kabajamaa akka tureef jirudha kan beekamu. Sirni ayyaana Irreechaa galateeffannaa waaqa uumaa yoo ta’u, Birraan yoo bari’u uummatni walitti dhufee kan horatti bobbaa’uun kabajatudha.
Ayyaanni Irreechaa hiituu waaqaaf uummataa, yoo ta’u waaqa bacaqii Gannaa dukkana san keessaa gara ifaatti baaseef ooqubaa kan kennan akka ta’e abbootiin dubbatu.
Ayyaanni Irreechaa uummata Oromoof ayyaanota guddaa inni kabaju keessaa isa olaanaadha. Bakka ayyaana Irreechaa kanatti galateeffannaa Waaqaa cinatti rakkoo jiruuf jireenya illee bakka itti hiika itti kennuuf hojjetuudha.
Dhiibbaan sirna mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaan kan irratti godhamu uummata Oromoo, ayyaanota inni kabaju haqaaqanii dabsuu fi kaan isaanii ammoo dhorkuun hanga ammaa dhiibbaan kan irratti godhamaa jirudha.
Dhiyeenyuma bara 2016 bakka ayyaana Irreechaa hora Bishooftuutti uummata Oromoo miliyoona shaniin tilmaamamu kan bakka tokkotti argame irratti dhukaasi banamuun lubbuun lammiilee kumaan lakkaa’amu darbuun madaa Oromoon hanga har’aa kulkulfataa jiru keessaa isa tokko.
Kabajaa ayyaana irreechaa irratti meeshaa waraanaan ajjabamanii uummata doorsisuu fi shororkeessuun hanga har’aa illee itti fufee akka jiru eeramaa jira.
Sirna ayyaana Irreechaa har’aa kan Finfinnee kana irrattis jala bultii isaa kaleessaa irraa eegalee dhaadannoolee mormii sirna mootummaa agarsiisan uummata biraa dhageessifamaa jiraachuutu himama. Waraanni mootummaa lakkoofsaan hedduu ta’an bobbaafamuun isaas himameera.
Waraanni mootummaa jala bultii isaa irraa eegaluun qophii jajjabaa kaleessaa qabee taasisaa akka jiru himama. Uummatni Oromoo gootonni biyya ofiif lammii ofiif falmuuf tasa duuba hin jenne danqaaf danqaraa meeshaa waraanaa ammayyaan ajjabame keessa dhaabbatanii mormii dhageessisaa akka jiran gabaafamaa jira.
Kana sababeeffachuu hanga ammaatti odeessa qabnuun namooti hedduun reebicha waraana mootummaan miidhamuun isaanii odeeffamaa jira. Namootiin bol’a keessa bu’anii du’anis jiru kan jedhu illee odeessi hin mirkanoofne deddeemaa jira.
Ayyaana kana irratti alaabaan uummata Oromoo faajjiin ABO qabatamee bahuun uummata harkaa mul’atee jira. Kun ammoo abdiif egeree qabsoo bilisummaa Oromoo kan jabeessuu ta’uudha kan hubatame.
Dhaadannoon Marroon Finfinnee gala jedhus akka dhagaa’amaa jiru odeeffannee jirra. Hanga gabaasa kana qopheessinetti odeessi ayyaana irreechaan wal qabatee qabnu kana fakkaata. Waan jiru itti dhiyeenyaan hordofnee isin biraan geenya.
Oduu Kello Media - Hagaya 6, 2021
OSFNA guyyaa 6ffaa - Dirree Dhawaa VS Oromo United Oromiyaa Tibbana | KELLO MEDIA (Adoolessa…
Watched your news casting live for the first time! Another great reporting! Proud of you youngsters! Rest assured, I will be SUPPORTING YOU AND your work any which way I can; as long as you remain committed to supporting our sons and daughters who are bearing arms in our stead!
You are fast becoming my favorites too in the sphere of our Oromo YouTube web news casters! Btw, make sure you establish a presence on Networks that are less susceptible to Censorship and blackmail, such as, Rumble, just in case Ms Susan Wojcicki of YouTube & the Google Gulag decide to CAN you AGAIN!